OnePlus X ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည် Androidsis
OnePlus X ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည်
Alfonso က de Frutos | | NOTICIAS
ကျွန်ုပ်တို့သည် OnePlus X ရောက်ရှိရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်။ အစကန ဦး OnePlus Mini ဟုခေါ်သည် OnePlus မှထုတ်လုပ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်ကိုအောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင်ပြသမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြီးသားကိုငါသိ၏ စျေးနှုန်းနှင့် OnePlus X. ၏ဒီဇိုင်း
ထို့အပြင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်နှစ်ချက်ကိုပြသထားသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးပိုစတာတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာ OnePlus X ၏ပုံရိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတွက်ဒီအပင်ကင်းကင်းဗားရှင်း၏ဒီဇိုင်းမည်သို့မည်ပုံရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်း၏စျေးနှုန်း: အချို့ ပြောင်းလဲပစ်ရန်ယူရို 270 ။ အနည်းဆုံးတရုတ်နိုင်ငံတွင်။
ဖြစ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်ဒီဇိုင်း OnePlus X ကိုစစ်ထုတ်သည်
ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် OnePlus X တွင် ၅၈ လက်မဖန်သားပြင်တပ်ဆင်ထားပြီး ၁၀၈၀p resolution ရှိသည့်အပြင်၊ Qualcomm Snapdragon 801,3GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 32 GB ရှိပြီး micro SD ကဒ်များမှတစ်ဆင့် memory ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
OnePlus X တွင်ကင်မရာနှစ်ခုရှိသည် 13 megapixel မှန်ဘီလူးရှေ့ကင်မရာ 8 megapixel အပြင် မည်သည့်ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူအတွက်လုံလောက်သောနည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများထက်ပို။
ဒေါ်လာသန်းမေးခွန်းတစ်ခုမှာ OnePlus X ကိုယူရို ၂၅၀-၃၀၀ လောက်တန်သင့်သလား။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ငါမကြောက်ဘူး ပထမဆုံး OnePlus One နှင့်ယခုအာရှထုတ်လုပ်သူများရောက်ရှိလာပြီးကတည်းကစျေးကွက်ကများစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။
အမှန်တရားဖြစ်သော်လည်း OnePlus X တွင်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုပြproblemsနာမရှိဘဲရွေ့လျားနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာထက်ပိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင်စျေးသို့ရောက်ရှိပါက ယူရို ၂၉၉ ထက်ပိုမြင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ငါသူတို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာငါကြောက်တယ်။
OnePlus X ကိုဘာကြောင့် ၀ ယ်ရတာလဲ။ အထူးသဖြင့်သူတို့မှာစပိန်မှာသူတို့မှာ SAT မရှိဘူး၊ ဖုန်းမှာပြanyနာရှိရင်ဒီစျေးနှုန်းကို ၂၉၉ ယူရိုကိုတရုတ်ကိုပို့ဖို့အတင်းဖိအားပေးမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာစွမ်းဆောင်ရည်တူတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတွေဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတယ်။
သင်အနည်းငယ်ကြည့်လျှင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည် ထက်နည်း6ယူရိုများအတွက် Nexus 350တောင်မှ ဂုဏ်အသရေ7သင်တစ် ဦး ၏အားသာချက်ကိုယူလျှင်သင်ယူရို 300 အဘို့အရနိုင်သည် သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်လုပ်ကမ်းလှမ်းမှု။
ကျွန်ုပ်၏နိဂုံးချုပ်သည်အလွန်ရှင်းလင်းသည် OnePlus သည် OnePlus Two နှင့်အလွန်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်ကြိုက်တယ် ဒီစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုမှာသင်တွေ့နိုင်တယ်၊ ငါ OnePlus X အတူတူပင်သွားလိမ့်မည်ဟုကြောက်တယ်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? နောက်ဆုံးတွင်ယူရို ၃၀၀ သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသောကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏တိုင်းပြည်တွင်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေရန် OnePlus X သည်အမှန်ပင်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus X ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည်
အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုသည်တစ်စက္ကန့်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမရှိဘဲပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်မလိုပါ
ဤသည် OPPO terminal အသစ်၊ OPPO Neo7ဖြစ်သည်